स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति विरुद्ध डा. गोविन्द केसीको अनसन जारी
काठमाडौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाइरहेका विकृतिहरुको अन्त्यका लागि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति दिन–प्रतिदन नाजुक बन्दै जाँदा पनि ओली सरकार डा. केसीले उठाएका मागप्रति गम्भीर देखिएको छैन । डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरुप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिने गरेका अभिव्यक्तिहरुले ओली सरकारले ‘अमानवीय’ पदमार्ग पछ्याएको छनक दिएका छन् ।
काठमाडौं। मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास गरेको महिनौँ बितिसक्दा समेत दुई वटा बाहेक प्रदेशले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म प्रदेश ६ र ४ ले मात्रै प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानी तोकेका छन् । बाँकी प्रदेशमा त्यसबारे छलफल समेत हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद दुर्गा पौडेलले आफूले ५ नं. प्रदेशको राजधानी बुटवल हुनु पर्दछ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आत्मालोचना गर्नु भएको छ । २०७५ असार २० गते प्रेस वक्तव्य जारी गर्दैै आत्मालोचना गरिएको हो ।
धनगढी । राष्ट्रिय जनमोर्चाले धनगढीको मार्कमोडमा सभा सम्पन्न गरेको छ । राजमोको केन्द्रीय प्रचार अभियान अन्तर्गत २०७५ असार २२ गते सो सभा सम्पन्न गरिएको हो ।